အတိတ်က ပြုခဲ့သော ( ၃ ဘဝ ) ဝဋ်ကြွေး အကြောင်းသိကောင်းစရာများ ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
သား/သမီး ကြတော့ “ အကြွေး ” ပေါ့။ တစ်နည်းအားဖြင့် ကျေးဇူးဆပ်ခြင်းနှင့် အကြွေးတောင်းခြင်း ဟူ၍ နှစ်မျိုးကွဲပြားသွားလိမ့်မယ်။ ဝဋ်ကြွေးမရှိခဲ့လျှင် အဖေ ၊ အမေ နှင့် သား/သမီး ဆိုပြီး ပေါ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူးး။
* ဒါ့ကြောင့်မို့လို့ ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေ အတူတကွ ပြုလာကြတဲ့ လင်မယားတွေကြတော့ နေနဲ့လ ရွှေနဲ့မြ လို့ ဆိုသလို
သက်ဆုံးတိုင် ရွှေလက်တွဲသွားကြသလို ၊ အကုသိုလ်တွေ အတူတကွပြုလုပ်လာခဲ့ကြတဲ့ အတွဲတွေကျပြန်တော့လည်း အိမ်ပူ ၊ ရန်ဖြစ် ၊ စိတ်ဆင်းရဲပြီး သေကွဲမကွဲတောင် ရှင်ကွဲ ကွဲနေရတဲ့ အဖြစ်မျိုးနဲ့ ကြုံရတတ်တယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။
* အကြွေးလာတောင်းတဲ့ သား/သမီး ကြပြန်တော့လည်း ဘယ်နေရာမှ အသုံးမကြဘူးးးမိဘစိတ်ဆင်းရဲအောင် အမြဲလုပ်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။
အကြွေးလာဆပ်တဲ့ သား/သမီးကြတော့ မိဘဝတ္တရားကို နားလည်ပြီး မျက်နှာပျက်ရမဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကို ရှောင်ကျဉ်လေ့ရှိတယ်။
လူရယ်လို့ မွေးဖွားလာပြီဆို တွေ့ ဆုံ ၊ လမ်းခွဲ ၊ ပျှော်ရွှင်မှု ၊ ဝေဒနာ ခံစားရမှု ၊ စိတ်ဆင်းရဲခြင်း ၊ ခွင့်လွှတ်ပေးခြင်း ၊ အငြိုတေးထားခြင်း ၊ ချစ်ခြင်း ၊ မုန်းခြင်း စတဲ့အချက်တွေက ကိုယ်ပြုခဲ့တဲ့ အတိတ်က ကံကြောင့် လက်ရှိဘဝမှာ ကိုယ့်ဆီပြန်လာမဲ့ တန်ပြန် ဝဋ်ကြွေးဆိုရင်လည်း မမှားပေနိုင်ဘူးလေ။
၁. ကျေးဇူးလာဆပ်သော သား/သမီးများ
အတိတ်ဘဝက ကောင်းမှုကုသိုလ်များဖြင့် အတူတကွပြုလုပ်လာခဲ့ကြသော သူများသည် လက်ရှိဘဝတွင်
အဖေ ၊ အမေ နှင့် သား/ သမီးများ အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိကြရမည်ဟု ဆိုထားသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ထိုသူတို့ကို “ ကျေးဇူးသိတတ်သော သူများ ” ဟု ခေါ်ကြသည်။ မိဘစကားကို အစဉ်အမြဲ နားထောင်ပြီး သိတတ်သောသူ၊ လိမ္မာရေးခြားရှိပြီး မိဘများ စိတ်သောကရောက်ရမည့် အဖြစ်များမှ ရှောင်ရှားနိုင်သူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။
၂. ကလဲ့စားလာချေသော သား/သမီးများ
အတိတ်ကံက ပြုခဲ့သော အကုသိုလ်အကျိုးဆက်ကြောင့် လက်ရှိဘဝမှာ မိသားစုအဖြစ် ရောက်ကြရသည်ဟုလည်း ဆိုထားပြန်သည်။ ထိုသူတို့ အရွယ်ရောက်လာကြသောအခါ မိသားစု စည်းစိမ်များကို သုံးဖြုန်းခြင်း ၊ စိတ်ဆင်းရဲအောင်ပြုလုပ်ခြင်းများနှင့် အိမ်ထောင်စုတစ်ခုပြိုကွဲသွားသည်အထိ ဖြစ်တတ်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ အဲ့လိုလူမျိုးကို “ ကျေးဇူးကန်းသော သူ ” ဟု ခေါ်တွင်စေသည်။ သူတို့လေးတွေနဲ့ ဝဋ်ကြွေးတွေ ထပ်မပြုလုပ်မိစေရန် ရှောင်ကျဉ်ကြပါ။ သူစိမ်းလူတွေဖြစ်ခဲ့လျှင် ကာကွယ်နိုင်ကောင်း ကာကွယ်နိုင်လိမ့်မည်။ ခုဟာက အိမ်က ကိုယ့်သား/သမီးများဖြစ်သောကြောင့် အခက်ရပေမည်။ ထို့ကြောင့် လူတို့သည် မည်သူမဆို ကိုယ့်ကိုချစ်ကြသည်။ သေရမှာကိုလည်း ကြောက်သောကြောင့် ဘယ်နည်းနဲ့မှ အကုသိုလ်တွေ မလုပ်မိကြဖို့နှင့် သူတစ်ပါးအသက်ကို မသတ်မိစေရန် ဆင်ခြင်နိုင်ကြပါစေ။
၃. အကြွေးလာတောင်းသော သား/ သမီးများ
အတိတ်ဘဝတွင် မိဘများက ပေးရန် ကျန်ခဲ့သောကြောင့် လက်ရှိဘဝတွင် သား / သမီး က လာရောက်တောင်းရမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ အသက်ကြွေးမဟုတ်ဘဲ ငွေကြေးဟုလည်း ဆိုထားပြန်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ကိုယ်သူ့အပေါ် ပေးဆပ်ရမည့် အကြွေးနှင့် သက်ဆိုင်သွားသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ကိုယ်ပေးရမည့် အကြွေးက နည်းလျှင် ကိုယ့်ဆီမှာ တစ်နှစ် နှစ်နှစ်လောက်သာ နေပြီး သေဆုံးသွားကြသည်။ ကိုယ်ဘယ်လောက်ဘဲ သူ့ကို ချစ်သည်သော်ငှားလည်း သူ ကိုယ်နှင့်နေမည် မဟုတ်။ သူ ရ ရန်အကြွေးကုန်လျှင် ကိုယ့်ဆီက ထွက်ခွာသွားလိမ့်မည်။ အကြွေးများရင်တော့ ကိုယ့်ဆီမှာ သူ ကြီးပြင်းလာတဲ့အထိ တက္ကသိုလ်ရောက်သည်အထိ ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ရလိမ့်မည်။ ပြီးရင် ကိုယ့်ကို ထားပြီး ထွက်ခွာသွားလိမ့်မည်။ ကိုယ့်ကို ပြုစုဖို့ မွေးလာသည် မဟုတ်။ ကိုယ်ပေးရမယ့် အကြွေးတွေ ပြန်လာတောင်းခြင်းဖြစ်သည်။
၄. အကြွေးလာဆပ်သော သား/သမီးများ
တစ်နည်းအားဖြင့် ထိုသူတို့သည် အတိတ်ဘဝက ပြုခဲ့သော ဝဋ်ကြွေးကြောင့် သား/သမီးအဖြစ်သို့ လာရောက်ကြွေးဆပ်ရခြင်းဖြစ်၏။ ဝဋ်ကြွေးအနည်းအများ ကွာခြားသွားမည်။ ပေးဆပ်ရမည့် အကြွေးများလျှင် မိဘနှစ်ပါးကို ကောင်းမွန်စွာ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရမည်။ နည်းလျှင် နည်းသလို သူ့သဘာဝနည်းလမ်းအတိုင်း မြင်တွေ့ ကြရပေလိမ့်မည်။
ထိုလူစားမျိုးသည် ကျွေးသာ ကျွေးနေရသည်။ စိတ်ရင်းက မပါ။ ဘဝဝဋ်ကြွေးကြောင့်သာ လာဆပ်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးလာဆပ်သောသူနှင့်လည်း ကွာခြားသွားသည်။ ထိုသူသည် စိတ်ရောကိုယ်ပါ မိဘဝတ္တရား သိတတ်ပြီး ကျေးဇူးလာဆပ်သောသူ ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
* အပေါ်က အချက်တွေကို ဖတ်ခြင်းအားဖြင့် တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်း ဖြင့် သံသရာလည်နေကြသည်။ မိသားစု ဆွေမျိုးအတိုင်းအဝိုင်းများသာမက ပတ်ဝန်းကျင် ဘေးအိမ်များကလည်း ရှေးဘဝရေစက်ကြောင့် ပြန်လည်ဆုံကြခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ပြောထားသည်။ ဈေးသွားလို့ လမ်းမှာ တွေ့ ခဲ့တဲ့ လူစိမ်းတစ်ဦးကို ကိုယ်ကအစ ပြုံးပြလို့ ထိုသူလည်း ကိုယ့်ကို ပြန်လည်ပြုံးပြနူတ်ဆက်ခဲ့လျှင်ဖြင့် အတိတ်ရေစက်က ကောင်းမှုအကျိုးဆက်ကြောင့် ပြန်လည်ဆုံခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ အကယ်လို့ သူစိမ်းတစ်ဦးကို ကြည့်မရခဲ့သည်ရှိသော် ထိုသူနှင့် ကိုယ်သည် အတိတ်ဘဝက မကောင်းမှုပြုခဲ့သောကြောင့်သာ ဖြစ်သည်။ ဤအကျိုးဆက်တွေရဲ့အကြောင်းကို သင်တို့ ကျမတို့ နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့လျှင် ရှေ့ဆက်ပြီး ကုသိုလ်များကို အဘယ်သို့ ပြုလုပ် ဖြတ်သန်းကြမည်လို့ ယူဆထားပါသနည်း??
သို့မဟုတ် ညစ်ညမ်းသော အကုသိုလ်အလုပ်များ ဆက်လုပ်ပါမည်လော??
ကိုယ်ပြုခဲ့သော အတိတ်ဘဝက ဝဋ်ကြွေးကို မသိခဲ့သော်လည်း လက်ရှိဘဝတွင် ပြုပြင်နိုင်သေးသည်။ နည်းလမ်းများလည်း ရှိနေသေးသည်။ ကိုယ်ချစ်သော သား/သမီး ဆွေမျိုးအတိုင်းအဝိုင်းများအား ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ သွားခြင်း၊ တရားဓမ္မအားထုတ်ခြင်း၊ ကောင်းမှုကုသိုလ်များ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကိုယ်ပြုခဲ့သော အတိတ်က ကံကို အနည်းအကျဉ်းလျှော့ချပေးနိုင်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်တော့
“ မကောင်းမှုကို ကောင်းမှုနှင့် ချေပခြင်း ” လို့ ပြောလို့ ရသည်။
နောက်တစ်မျိုးကတော့ အဆိုးထဲမှ အကောင်း လို့ဘဲ ယူဆကြရတော့မှာပေါ့။
‪#‎ကိကိ‬ ( ဘာသာပြန် )
credit - original